Ethambutol (အီသမ်ဗျူတော အိုင်အန်အိတ်ခ်ျ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Ethambutol (အီသမ်ဗျူတော အိုင်အန်အိတ်ခ်ျ)
Ethambutol (အီသမ်ဗျူတော အိုင်အန်အိတ်ခ်ျ) ကဘာလဲ။
Generic Name: Ethambutol (အီသမ်ဗျူတော အိုင်အန်အိတ်ခ်ျ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Ethambutol (အီသမ်ဗျူတော အိုင်အန်အိတ်ခ်ျ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Ethambutol INH သည် တီဘီရောဂါ(အမျိုးအစား ၁ နှင့် ၃)တွင် အများဆုံး အသုံးပြုသောဆေး ဖြစ်ပါသည်။
ထိုဆေးကို တီဘီရောဂါ ကုသမှု၏ နောက်ဆက်တွဲအဆင့်များတွင် သုံးပါသည်။
Ethambutol INH ကိုဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်ပါသလဲ။
Ethambutol နှင့် Isoniazid ဆေးများကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသည့် အတိုင်းသောက်သင့်ပါသည်။
အစာမစားမီ အနည်းဆုံး ၁ နာရီနှင့် အစာစားပြီး ၂ နာရီခန့်ခြားမှ သောက်သင့်ပါသည်။
Ethambutol INH ကိုဘယ်လိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားသင့်ပါသလဲ။
Ethambutol INH ကို ၂၅ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ်အောက် မှာသိမ်းပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Ethambutol INH ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Ethambutol INH ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Ethambutol (အီသမ်ဗျူတော အိုင်အန်အိတ်ခ်ျ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Ethambutol နှင့် Isoniazid ဆေးများကို အခြားသော တီဘီဆေးများနှင့် တွဲသောက်ခြင်းသည် အသည်းကို ပျက်စီးစေသောကြောင့် တွဲမသောက်ရပါ။
တီဘီရောဂါ ကုသမှုများတွင် Ethambutol နှင့် Isoniazid ဆေးများကို အခြားသော ဖော်စပ်ပုံ ဆေးပမာဏများကို ဆရာဝန်ကညွှန်ကြားထားလျှင်သာ သောက်ရပါမည်။
ဆေးသောက်နေရင်း အောက်ဖော်ပြပါ အသည်းထိခိုက်သည့် လက္ခဏာများပေါ်လာလျှင် ဆရာဝန်အား ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရပါမည်။
ခြေ လက်များ ထုံကျဉ်ခြင်း
အဆက်မပြတ်မောပန်းခြင်း၊ ၃ ရက်ထက်ပိုပြီး အားနည်းခြင်း
ဗိုက်အောင့်ခြင်း (အထူးသဖြင့် ညာဘက် အပေါ်ပိုင်းတွင်)
ထိုလက္ခဏာများရှိလှင် ဆရာဝန်က အသည်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။
ထို့ပြင် Ethambutol နှင့် Isoniazid ဆေးများသည် မျက်လုံးများကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ဆိုးကျိုးရှိခြင်းကြောင့် အမြင်အာရုံ ပြသနာများရှိပါက ဆရာဝန်အား ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရပါမည်။
အမြင်အာရုံပြောင်းလဲမှုများကို ကောင်းစွာ မပြောနိုင်သော ကလေးများနှင့် ဆေးမသောက်မီတည်းက အမြင်အာရုံမကောင်းသောသူများကို ဆေးသောက်နေစဉ် ပိုပြီး ဂရုစိုက်ရပါမည်။
ဆေးသောက်နေရင်း သွေးထဲတွင် ယူရစ် အက်ဆစ် ပမာဏများ မြင့်တက်လာပါက ရောဂါ လက္ခဏာများကို ပိုပြီး သတိပြုရပါမည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင် သို့မဟုတ် ကလေးယူရန် စီစဉ်နေလျှင် ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Ethambutol နှင့် Isoniazid ဆေးများသည် မိခင်နို့ထဲတွင်ပါနိုင်သော်လည်း နို့စို့သော ကလေးငယ်များတွင် ဆိုးကျိုး တစ်စုံတစ်ရာ မတွေ့ရသေးပါ။
သို့သော် မိခင်နို့ရည်ထဲတွင် ပါသော ပမာဏသည် အလွန်နည်းသောကြောင့် မိခင်မှ ကလေးကို မကူးစက်ရန် ကာကွယ်နိုင်သည့် လုံလောက်သော ပမာဏ မဟုတ်ပါ။
Ethambutol (အီသမ်ဗျူတော အိုင်အန်အိတ်ခ်ျ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါတို့သည် Ethambutol နှင့် Isoniazid တို့ကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပါသည်။ အရေးအကြီးဆုံး သတိထားရမည်မှာ ထိုဆေးများသည် အမြင်အာရုံကြောကို ရောင်ရမ်းစေခြင်း၊ အခြားအာရုံကြောများကို ထိခိုက်စေခြင်းနှင့် အသည်းကို ရောင်ရမ်းစေခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
၁၀ ယောက်တွင် ၁ ယောက်နှုန်းနှင့် အဖြစ်များဆုံးသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ အရေပြားများ(အထူးသဖြင့် လက်နှင့် ခြေတို့) စူးရှ ထုံကျဉ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် သွေးထဲတွင် ယူရစ် အက်ဆစ် ပမာဏများ ကိုလည်း မြင့်တက်လာစေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဆေးစသောက်စဉ် ၁ လမှ ၃ လအတွင် မြင့်တက်ပြီး ကျန်အချိန်များတွင် ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားပါသည်။ သို့သော် ပမာဏလွန်ကဲစွာ ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်သည် ဆေးကို ဖြတ်ရန် စဉ်းစားပါလိမ့်မည်။
ဆေးသောက်သူ လူ ၁၀၀ တွင် ၁ ယောက်သည် မျက်စိအမြင်အာရုံကြောရောင်ရမ်းခြင်းကို ခံစားရပါသည်။ သို့သော် သောက်ရသောဆေးပမာဏနှင့်လည်း ဆိုင်ပါသည်။ လက္ခဏာများမှည အရောင်များ မကွဲပြားတော့ခြင်းနှင့် မြင်ကွင်းအလယ်နှင့် ဘေးဘက်ရှိနေရာများ ကျဉ်းသွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Ethambutol ဆေးရပ်လိုက်လျှင် ထိုလက္ခဏာများ ပျောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အမြင်အာရုံနှင့် ဆိုင်သော ပြသနာတစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင် ဆရာဝန်ထံ ချက်ချင်းဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဖြစ်နည်းသော ဆိုးကျိုးများ(လူ ၁၀၀၀တွင် ၁ ယောက်ဖြစ်သော)မှာ
ဦးနှောက်ရောင်ခြင်းကြောင့် အမူအရာများပြောင်းလဲသွားခြင်းနှင့် မှတ်ဉာဏ်များ ချို့ယွင်းသွားခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Ethambutol (အီသမ်ဗျူတော အိုင်အန်အိတ်ခ်ျ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ethambutol INH ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အောက်ပါဆေးများနှင့် Ethambutol နှင့် Isoniazid ကို တွဲမသောက်သင့်ပါ။
အစာအိမ်အက်ဆစ်ဓါတ်ကို နည်းစေသော ဆေးများ(aluminium hydroxide)
အောက်ပါဆေးများသည် Ethambutol INH နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသည်။
အတက်ရောဂါ ကုဆေး (phenytoin, carbamazepine, valproic acid)
benzodiazepines အိပ်ဆေးများ(diazepam, flurazepam, triazolam, midazolam)
သွေးကျဲဆေးများ(coumarin- indandione-derivates, e.g. warfarin)
မခွဲစိတ်မီတွင် သုံးသောဆေးများ (alfentanil, enflurane)
အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးများ (acetaminophen or paracetamol)
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Ethambutol INH နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Ethambutol INH က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Ethambutol INH နဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
Ethambutol INH ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Ethambutol (အီသမ်ဗျူတော အိုင်အန်အိတ်ခ်ျ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
လူနာ၏ ကိုယ်အလေးချိန် အပေါ်မူတည်ပြီး Ethambutol INH ကိုသောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစား ကွာခြားသွားပါသည်။
၄၀ မှ ၅၅ ကီလိုအောက်တွင် တနေ့ ၂ ပြား နေ့စဉ် ဖြစ်ပါသည်။
၅၅ ကီလိုအထက်တွင် တနေ့ ၃ ပြား နေ့စဉ် ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးများသည် ကီလို ၄၀အောက်လူနာများတွင် သောက်ရန် မသင့်တော်ပါ။
အကယ်၍ သင့်တွင် ဥပမာအားဖြင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါ ရှိနေသောကြောင့် ဆေးပမာဏကို လျှော့သောက်ရမည့် အနေအထားမျိုးတွင် Ethambutol နှင့် Isoniazid ကို သက်သက်စီခွဲသောက်နိုင်ပါသည်။
ကလေးငယ်တွေမှာ Dobutamine ကိုသောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားကဘယ်လောက်လဲ။
Ethambutol INH ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးအချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲ။
Ethambutol INH ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Ethambutol ၄၀၀ မီလီဂရမ်နှင့် INH ၁၅၀ မီလီဂရမ်
Ethambutol INH ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ နောက်တစ်ကြိမ်သောက်ရမည့်အချိန်ထက် ၆ နာရီကျော် လိုနေသေးလျှင် မေ့သွားသည့်ဆေးကို အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နှင့် ၆ နာရီ အောက် နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။